पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण सेवा निःशुल्क गर्न निर्देशन « News24 : Premium News Channel
Posted By News24Nepal.TV || Date:7January, 2017
काठमाडौं । महिलामा सबैभन्दा बढी देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि देशभरका सरकारी अस्पतालले निःशुल्क परीक्षण सेवा दिने भएका छन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा सृष्टि प्रजापतिका अनुसार यस सङ्क्रमणलाई प्रि क्यान्सर भनिन्छ । यसको भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ । समयमै सङ्क्रमण पत्ता लगाउन नसके आठ÷दश वर्षपछि क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । “सङ्क्रमण भए÷नभएको प्याप स्मेयर टेस्ट ९गर्भाशय स्राव परीक्षण० गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ,” प्रजापतिले बताए ।
परिक्षण पाँच मिनेटदेखि १५ मिनेटमा गर्न सकिन्छ । प्याप स्मेयर गर्दा दुई दिन अगाडिदेखि यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन । साथै सो परीक्षण महिनावारी भएका बेला गर्न मिल्दैन ।
परीक्षणका लागि सकभर एक हप्ताअघि एन्टिबायोटिक औषधि खानु हुँदैन । परीक्षण ३५ वर्षदेखि ६० वर्षका महिलाले वर्षको कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । परीक्षणले भविष्यमा ठूलो धनजनको क्षति हुनबाट बचाउँछ ।
प्रचण्ड निवास खुमलटार जाने सडक महीना दिन भित्र कालोपत्रे हुने
भूमिसुधार कार्यालयका नासु १० हजार घुस लिँदालिँदै समातिए
प्रदेश तीनको प्रदेशसभा बैठक १३ गते बस्ने
नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेन
यिनी हुन् चन्द्रमामा ८० रोपनी जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली (लालपुर्जा सहित)
के लालबाबु पण्डितलाई पनि सत्ताको मात लाग्यो ? वास्तविकता के ?
दुर्घटनामा परेको बंगला बिमानको पाइलटकी पत्नीको पनि मृत्यु
सिरिया युद्ध: पूर्वी गुटामा गएरातिदेखि युद्धविराम